डाक्टरसाब मेरो ५ महिना अघिको यो गल्तीले के मलाई एचआईभी लाग्यो होला ? – Jagaran Nepal
डाक्टरसाब मेरो ५ महिना अघिको यो गल्तीले के मलाई एचआईभी लाग्यो होला ?
Jagaran Nepal आइतबार, भाद्र २०, २०७८
काठमाडौं । ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस आजका दिनमा एकदम खतरा बन्दै गएको छ । यसको उपचार विश्वभर नै उपलब्ध छैन । असुरक्षित तरिकाले भौतिक सुःख प्राप्त गर्न खोज्दा यस्ता खालका डरलाग्दा रोगको भागिदार हुने गरेका छन् ।
कतिपयलाई यस बारेमा जानकारी पनि हुँदैन् । यस्तै विषयमा एक महिलाले डा. प्रकाश कोठारीसँग प्रश्न सोधेकी छिन् । तपाईंको सहजताका लागि हामी उक्त महिलाको काल्पिनक नाम सपना राखेका छौं ।
सपनाको प्रश्नः मैले जुलाईमा एक अपरिचीत व्यक्तिसँग भौतिक सम्बन्ध राखेको थिएँ । अब ५ महिना पछि, मलाई शरीरमा पीडा र ज्वरो आउन थालेको छ । के यो ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस ( एचआईभी) को लक्षणहरू हुन ? के म ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरस परीक्षण गर्न सक्छु ?
डाक्टर प्रकाश कोठारीको जवाफः यदि तपाईंले असुरक्षित तरिकाले सम्बन्ध राख्नु भएको छ भने तपाईंको शंका हटाउनको लागि, तपाईंले ३ महिना पछि यसको परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ । तपाईंको ३ महिना भन्दा बढी समय भएको छ, त्यसैले अब तपाईं परीक्षण गर्न सक्षम हुनुहुन्छ । यस भन्दा पहिले, ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी भाइरसको रिपोर्ट प्राप्त गर्ने दायरा कम हुन्छ ।
जहाँसम्म शरीरमा दुखाइ र ज्वरोको सम्बन्ध छ, लक्षणहरू जुन तपाईं मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यी सबैको यस रोगसँग कुनै सम्बन्ध छैन । यो भाइरल वा ब्याक्टेरिया संक्रमण वा अन्य कुनै कारणले हुन सक्छ । यदि तपाई चाहनुहुन्छ भने, एक फिजियोलोजिस्टसँग भेट्नुहोस् । उसले तपाईंलाई सही सल्लाह दिनेछ । आउँदा दिनहरुमा यसरी सम्बन्ध कायम गर्दा सावधानी अपनाउन नबिर्सनुहोला ।